Banyere Martech Zone | Martech Zone
Ọ malitere dị ka ụlọ ọrụ akwụkwọ.
Ee, eji m okwu. Amalitere m ọrụ na weebụ ihe karịrị afọ iri abụọ gara aga. Saịtị izizi m bụ saịtị akpọrọ Helping Hand nke gwọchara saịtị kacha mma na gburugburu web iji nyere ndị mmadụ aka na kọmpụta ha yana ịgagharị akụ na ntanetị. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, resịrị m ngalaba ahụ ụlọ ọrụ nke nyeere ndị mmadụ aka ịkwụsị ị smokingụ sịga, otu n'ime ndị mbụ m mere big nkwekọrịta.
Amalitere m ịde blọgụ na blogger ma jiri uri kọwaa ihe niile site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwaọrụ Internetntanetị. Anọ m ebe niile ma edekarịrị onwe m - na-enweghị ọtụtụ ndị na-ege ntị. Abụ m n’otu ụlọ ahịa a na-ere ahịa na Indianapolis nke na-anaghị achịkwa ngwa ngwa. Ka oge na-aga, achọpụtara m na ọtụtụ ndị otu na-abịakwute m maka ndụmọdụ teknụzụ. Njikọ nke teknụzụ m na azụmaahịa m na azụmaahịa m nọ na-achọ nnukwu ka rapidlyntanetị gbanwere ngwa ngwa na ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe m gụsịrị Mkparịta ụka gba ọtọ, A kpaliri m ịkwalite akara na ịchịkwa ọdịnaya dị na saịtị ahụ. Achọrọ m ka m nwekwuo ike ịchịkwa ọdịdị na mmetụta nke blọọgụ m, yabụ, m kwagara na ngalaba m, dknewmedia.com, na 2006 wee wuo saịtị WordPress mbụ m. Ebe ọ bụ na m lekwasịrị anya na teknụzụ ahịa, achọghị m ka ngalaba ahụ na aha m bata n'ụzọ, ya mere, m kwagara saịtị ahụ (n'ụzọ dị nro) gaa na ngalaba ọhụrụ ya na 2008 ebe ọ toro kemgbe ahụ.
The Martech Zone nwere ma jikwa ya Highbridge, ihe gị n'ụlọnga m malitere na 2009. Mgbe na-arụ ọrụ na ọ fọrọ nke nta ọ bụla isi online ahịa ngalaba na m nọ na ExactTarget na launching NgwakọtaM maara na e nwere oké ina n'ihi na m nka na nduzi n'ime ndị dị otú ahụ a mgbagwoju ụlọ ọrụ.
Highbridge bụ ụlọ ọrụ m na-ahụ maka mbipụta m, pọdkastị, nkuzi, webinars, yana ịde egwu. Highbridge bu nkem Onye ahịa ndị ọrụ ahịa ahịa nke ahụ na-enyere ụlọ ọrụ aka ịbawanye ego ha na ngwaahịa Salesforce na Marketing Cloud. Anyị na-enye mwekota, mbugharị, ọzụzụ, nyocha usoro, yana mmepe mmepe.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka nkwado gị kemgbe ọtụtụ afọ!
The Martech Zone ji nganga na-akwado Flywheel jikwaa WordPress Bochum anyi bukwa mmeko.